A Glimpse of My Life: The Mirror or Erised
တနင်္ဂနွေနေ့က မီးပျက်နေတုန်း စာအုပ် ဖတ်စရာ မရှိတာနဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး စာအုပ် The Philosopher's Stone ကို ပြန်ဖတ်ဖြစ်တာ။ ဟိုးအရင်တစ်ပတ်က ညီမက American Centre ကနေ Harry Potter & The Half-Blood Prince ငှားလာတော့ အဲ့ဒါဖတ်ပြီး၊ The Deadly Hallows ပါ ထပ်ပြီး ပြန်ဖတ်လိုက်သေးတယ်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရတာ တစ်ခါတစ်လေ small details လေးတွေက အစပိုင်း စာအုပ်တွေမှာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ အဲ့ဒီ details တွေက ပိုပြီး အရေးပါလာတယ်။ ဥပမာ - ပထမဆုံး စာအုပ်က မီးတိုင်တွေကနေ မီးတွေကို လှမ်းပြီးငြိှမ်းတဲ့ Putter-Outter (Deluminator) က နောက်ဆုံးစာအုပ်မှာ အရေးကြီးတဲ့နေရာက ပါလာတာမျိုးပေါ့.. ဒီတော့ တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ဒီလို ပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တော့ အရင်ဖတ်တုန်းက miss ဖြစ်မိတာလေးတွေကို ပြန်တွေ့ရတယ်။
ပထမဆုံး စာအုပ်မှာ The Mirror of Erised အကြောင်းပါတယ်။ Erised ဆိုတာ desire ကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားတာပါ။ အဲ့ဒီ ကြေးမုံပြင်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာက "erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi" .. ပြောင်းပြန်လှန်ဖတ်ရင် ... "I show not your face but your heart's desire" (သင့်ရဲ့ မျက်နှာကို မပြပဲ နှလုံးသားက တပ်မက်မှုကို ပြတယ်) လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အမှန်ပဲ မှန်ထဲကို ကြည့်ရင် သင့်ရဲ့မျက်နှာကို မပြပဲ သင့်ရဲ့ နှလုံးသားထဲက deepest & most desperate desire ကို ပြပါတယ်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဆိုရင် သူ တစ်ခါမှ မမြင်လိုက်ရတဲ့ သူ့ရဲ့ အဖေ၊ အမေ နဲ့ မိသားစုလေးကို မှန်ထဲမှာ မြင်ရတယ်။ ဒါက မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက် အလိုချင်ဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုပဲ။
ကျွန်မဆိုရင်ရော အဲ့ဒီမှန်ထဲကြည့်ရင် ဘာမြင်ရမလဲ။ ကျွန်မ သိတယ်... ကျွန်မ သူ့ကို မြင်မယ်။ ကျွန်မနဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်စရာ ကလေးလေးတွေ မြင်မယ်။ ကလေးလေးတွေက ၃ယောက်၊ မိန်းကလေး ၂ယောက်၊ ယောကျာ်းလေး တစ်ယောက်။ သူ့အဖေရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေရှိရင် ရှိမယ်... ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ဒီလိုသာ ဆိုရင် ကျွန်မလည်း ဟယ်ရီလိုပဲ အဲ့ဒီမှန်ကို အကြာကြီး ထိုင်ကြည့်နေဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
Professor Dumbledore က ဟယ်ရီကို ပြောပြတယ်။
...this mirror will give us neither knowledge or truth. Men have wasted away before it, entranced by what they have seen, or been driven mad, not knowing if what it shows is real or even possible. ... It does not do to dwell on dreams and forget to live...
"ဒီမှန်ဟာ ငါတို့ကို အသိဉာဏ်လည်း မပေးဘူး။ အမှန်တရားကိုလည်း မပေးဘူး။ လူအများစုဟာ ဒီမှန်ရှေ့မှာပဲ သူတို့မြင်ရတာတွေကို တပ်မက်ပြီး အချိန်ကုန်သွားကြတယ်.. သူတို့ဟာ မှန်ကပြတာတွေကို အမှန်တွေလား၊ ဖြစ်နိုင်မှုရှိလား ဆိုတာ မသိကြတဲ့အတွက် တစ်ချို့တွေက ရူးသွားကြတယ်။... စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေထဲမှာပဲ နစ်မြောပြီး အသက်ရှင်ဖို့ မေ့နေကြတာ မကောင်းဘူး"
ကျွန်မကိုဆိုရင်ရော.. Dumbledore က ဘာပြောမလဲ?
ကျွန်မကို သူများတွေ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ Dumbledore လိုပဲ "I see myself holdingapair of woolen socks" လို့ ပြန်ဖြေဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။ "I see myself holding an iPod Touch and wearing the straps toaCanon EOS 400D" လို့ ပြန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါက ပိုပြီး realistic ဖြစ်တာကိုး... :D
အခ်ိန္ 5/13/2009 10:56:00 AM စာေရးသူ - အရုဏ်ဦး
So you still haven't given up on him?
5/13/2009 05:17:00 PM
5/19/2009 11:38:00 AM